Grooved Fittings Vagadziri - China Grooved Fittings Fekitori & vanotengesa
Isu (CNG) tinopa Threaded Kuderedza Muchinjikwa. Iwo anoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi muhukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa. Isu tinopa grooved pombi fittings yemoto kurwisa system.
• Model 321G flange adapter inonyanya kushandiswa kuchinjisa kubatana kwemavharuvhu, zvishandiso kana mapaipi ayo anowirirana nemamwe mafiranges, ayo anogadzirisa kushandurwa kweiyo grooved kubatana, uye kumisikidza kuri kukurumidza uye nyore.
• Model 321G flange adapter ine bhaudhi gomba rakagadzirwa kuita denderedzwa chimiro.ANSI Kirasi 125 & 150 uye PN16 giredhi flanges anowanikwa kwese kwese, iine DN50 kusvika DN80 (2 '' kusvika 3 '') kune ese PN10 uye PN25 zita rezita flange.
Kuwedzera kune iri pamusoro chiyero flange pfupi pombi zvigadzirwa, mamwe mafrange zviyero zvinoyamwa seJIS 10K uye ANSI Kirasi 300 inogona zvakare kupihwa.
Isu (CNG) tinopa 300CH Cap neCon.hole, Iyo inoshandiswa kubaya pombi orifice, uye basa rayo rakafanana neiro remusoro nekopu, Dzinoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi mu hukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa.
Isu (CNG) tinopa 131 Grooved Pfupi Muchinjikwa. Iwo anoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi muhukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa.